Degdeg:- Somaliland oo ciidamo ku daadisay goobaha qashin qubka ee magaalada Laascaanood + Laba munaasabad oo dhacaya iyo xiisado taagan.
May 18, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta 1
Wararka haatan kusoo dhacaya warqabadka Marqaannews ee ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in xiisad kacsanaan ah ay ka jirto Magaalada Laascaanood, taasi oo udhaxeysa Ciidanka Somaliland iyo Dadka magaalada.
Sida wararka ay sheegayaan Somaliland ayaa saakay ciidamo isugu jira Bolis iyo Meleteri kusoo daadisay Xaafadaha magaalada kuwaas oo qorshuhu yahay in ay ka hortagaan xuska maalinta shacabka SSC ay uyaqaan maalinta qashinka ee 18ka May.
Waxaa magaalada kasocda laba munaasabad oo kala ah mid lagu xusayo maalinta gooni isutaaga Somaliland iyo Mid lagu xusayo maalinta qashinka ama nadaafadda gobollada Sool Sanaag iyo Ceyn Waxaana labada munaasabadba ay ku beegan yihiin maanta oo ah 18ka May.
Waxyaabaha layaabka leh ee maanta dhacay ayaa waxaa kamid ah in Ciidamadii ugu badnaa la geeyay goobaha qashinka Qubka iyo meelaha aalaaba qashinka lagu gubo taasi oo aan horay loo arag ujeedkuse wuxuu yahay in ciidamada ay carqaladeeyaan xuska shacabka is xilqaamay ee maalinta Qashinka.
Dadka ku sugan magaalada oo Marqaannews la hadlay waxay sheegeen in marnaba aysan baaqan doonin xiska maalintooda isla markaana ay ka hortagayaan cid waliba oo soo faragelisa.
Wixii soo kordha kala soco Marqaannews
Maxaan idiin shegayay car hana tusaan meel kaliya oo qashin laga gurayo,kkkkk
Kaliya maanta waxa socota samo kuwaar min lawyacado ilaa boocame,kkkkkkkk